Dhoobo ” Waa Xaaraan xil ka qaadistii la igu sameeyey”
By AxadleTM On Nov 7, 2019
Garowe-Soomaaliya: Gudoomiyaha Baarlamaanka Puntland Cabdixakiin Maxamed Axmed (Dhoobo) ayaa BBC Somali u sheegay in aysan “sharci ahayn” codkii maanta Baarlamanka ee xilka looga xayuubiyay.
Xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ayaa xilka ka qaaday Guddoomiyihii Baarlamaanka C/xakiin Dhoobo Daareed, kaddib mooshin ay ka keeneen.
Kulanka oo ay fadhiyeen 53 mudane ayaa 49 xubnood oo kamid ah u codeeyeen xilka qaadista guddoomiyaha, halka 4 xildhibaan ay ka aamustay, waxaana sidaasi xilka looga qaaday guddoomiyihii Golaha Wakiilada Dhoobo.
Taariikh nololeedka gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka Galmudug
Gudoomiye ku xigeenka 1aad ee baarlamaanka Galmudug oo la doortay
Kulanka waxaa shirgudoomiyay Gudoomiye ku xigeenka Golaha Wakiilada Puntland Abuukaate Cismaan,ayaa ku dhawaaqay in xilka laga Xayuubiyay Gudoomiyihii Golaha Wakiilada Maamulkaasi, oo uu ku eedeeyay in uu ku Xadgudbay Dastuurka Maamulkaasi.
Dhinaca kale, Abuukaate Cismaan ayaa wuxuu ku dhawaaqay Guddi doorasho oo ka kooban todoba xubnood, kuwaas oo isku daba ridi doona doorashadda gudoomiyaha cusub ee Golaha Wakiiladda Puntland.
Coddeynta Gudoomiyaha Cusub ee golaha wakiilada Puntland qabsoomi doontaa 14-ka bishaan November, waxaana murashaxiinta ay fursad u haystaan in ay isa soo diiwaan-geliyaan kahor maalinta coddeynta sida uu ku dhawaaqay Gudoomiye ku xigeenka Golaha Wakiilada Puntland.
Gudoomiyaha oo warbaahinta la hadlay in aan xilka laga xayuubin ayaa sheegay,in Madaxtooyada Puntland ay doonayso in ay burburiso ku dhaqanka destuurka Maamulkaasi,iska markaana aysan jirin cid xilka ka qaadi karta iyada oo aan loo marin Sifo sharci ah.
Saacadihii la soo dhaafay Magaaladda Garoowe waxaa ka taagnaa Xiisad u dhexaysa Madaxweynaha Maamulkaasi Siciid Cabdulaahi Deni iyo Gudoomiyaha Xilka laga qaaday ee Maamulkaasi waxaana dagaal xalay halkaasi ka dhacay ku dhintay ugu yaraan afar Ruux.